China umqondiso mveliso kunye nabathengisi | IsiDonghua
Elula ngakumbi kwaye yomelele kunesinyithi okanye imiqondiso yeplanga, imiqondiso yeplastiki inokumelana neemeko zangaphandle ezinokuphela, ukuqhekeka okanye ukuthotywa. Kwaye iiplastiki zinokubunjwa okanye zenziwe ngomatshini kwiinkcukacha ezichanekileyo ezifunekayo kumboniso okanye uphawu kwaye zingenziwa kuluhlu olubanzi lwemibala yesiko. UDhua ubonelela ngezinto zeshiti zeplastikhi zokutyikitywa kwaye unikezela ngokuzenzela.
• Iimpawu zoonobumba bamajelo
• Iimpawu zombane
• Iimpawu ze-LED
• Iibhodi zemenyu
• Iimpawu zeNeon
• Iimpawu zangaphandle
• Iimpawu ze-Thermoformorm
• Iimpawu zokubonisa
Izixhobo zomqondiso ezivela kwi-DHUA zigubungela iibhodi zeebhodi, amanqaku ebhodi, uphawu lwevenkile ethengisa kunye nemiboniso yentengiso yesitishi. Iimveliso eziqhelekileyo zibandakanya imiqondiso engeyiyo yombane, iibhodi zebhodi zedijithali, izikrini zevidiyo kunye neon. I-Dhua ikakhulu ibonelela ngezinto ze-acrylic ezifumaneka kumgangatho osemgangathweni, kunye namashiti okusika kunye nobungakanani kunye nokwenza okungafunekiyo kwesicelo seempawu.
Iimpawu ze-acrylic liphepha leplastiki eligqibeleleyo. Iza ngemibala eyahlukeneyo kubandakanya iqabaka kwaye icacile. Olu hlobo lophawu lubunzima bokukhanya kwaye bomelele ekusetyenzisweni ngaphandle nangaphandle. Ikwayinto eguqukayo kakhulu ukuba ilingane nakuphi na uyilo. Zininzi iindlela ezahlukeneyo zokusebenzisa ezenza lo mqondiso uthandwe kakhulu.
Cacisa i-Acrylic Sheet